Gerard Deulofeu Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Gerard Deulofeu Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nso
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara amara dị ka "Onye nkesa". Ụmụaka anyị bụ Deralofeu Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Ihe kpatara eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata, ndabere ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịrụ ọrụ, ndụ oge mbụ, ụzọ a na-akọ akụkọ, ebili na akụkọ a ma ama, ndụ mmekọrịta, ndụ onwe onye na ụdị ndụ ndị ọzọ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụghị ngwa ngwa, kama ọ bụ ọkachamara na-egwu egwu na nkà dị mma, dribbling ikike na anya maka ihe mgbaru ọsọ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ maara ọtụtụ ihe gbasara Gerard Deulofeu's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Gerard Deulofeu nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
Malite ya, aha ya bụ Gerard Deulofeu Lázaro. Gerard Deulofeu ka a na-akpọkarị ya n'ụbọchị 13th nke March 1994 na nne ya, Maria Jesús Lázaro na nna, Marcel Deulofeu n'obodo dị na Ribiarenes.
Gerard sitere na mpaghara Spanish dị ọcha, ya na ndị ezinụlọ ya nile sitere na Catalonia nke bụ agbụrụ agbụrụ nke FC Barcelona.
Gerard Deulofeu Mmalite Ezinụlọ.
Obodo Spanish a nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ bi gburugburu nde mmadụ 7.5, na-edekọ ihe karịrị 16% nke ọnụ ọgụgụ dum nke Spain na 6.3% (32,114sq km) nke Atlas na akpụkpọ ụkwụ Spain.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi si kwuo, Deulofou na-eto eto toro nanị ya na ndị mụrụ ya enweghị nwanne ma ọ bụ nwanne. Otú ọ dị, inwe nna na-ahụ n'anya na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma ka e nwee ike ịkụ egwu egwuregwu nke egwuregwu na ya mgbe ọ bụ nwatakịrị.
Ị maara?… Nwa Deulofeu na-eto eto na-etolite na umuaka umuaka na obodo ya. Dị ka DailyMail si kwuo, o tolitere inwe obi ike na àgwà nke imebi akara ya, na-eme ihe site na-acha anụnụ anụnụ na bọọlụ bọl.
Akụkọ Gerard Deulofeu nke Childhoodmụaka - Ọzụzụ na Mmụta:
Dabere na Liverpool Echo, N'oge ngwụcha 1990s, mkpọtụ nke ite akụ na-awụ akpata oyi, obodo nta ndị Catalonia nke Riudarenes na-ehi ụra mgbe niile, mkpọtụ nke iko na mkpu nke nne iwe, Maria Jesús Lázaro.
N'ime ulo obibi nke Deulofeus, a na-ahụ nwa okorobịa Gerard mgbe ọ bụla na-agba bọbbụ ụkwụ, aka nri na etiti. Mgbe ụfọdụ, ya na nna ya na ndị enyi ya ga-egwu na pitch.
Onye na-eto eto Gerard jiri oge ya na-agbanye talent ya n'ime ụlọ obibi. Gerard kwuru otu ihe banyere oge nwata;
"M na nna m na-aga na-eme ihe na obodo nta na ndị enyi m. Ma na ụlọ m, enwere m ike inwe 10 bọọlụ na ọganihu, ọganihu, mgbe niile. "
Mkpebi Maka Nkụzi Egwuregwu:
Dị ka e kwuru na mbụ, otu n'ime ndị nne na nna Gerard Deulofeu (nne ya) enweghị obi ụtọ na nwa ya nwoke gbapụrụ bọl n'ime ụlọ ha. N'ihi ya, otu nwanyị mere mkpebi ka nwa ya nwoke gara n'ihu na-ebibi ihe n'ezinụlọ ya na omume ịgba ụlọ ya.
Maria Jesús Lázaro na nkwado nke di ya kpebiri ka nwatakịrị Gerard gbasaa n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu football dị nso, Penya Bons Aires. Ọ gara ule n'ebe ahụ, na-agafe agba agba ma ghọọ onye otu na-eto eto.
Nwa okorobịa Gerard Deulofeu na Penya Bons Aires. Foto dị n'ihu - nke atọ site n'aka ekpe. Ebe E Si Nweta Instagram
Gerard Deulofeu akụkọ ndu eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe ọ gụsịrị Penya Bons Aires maka afọ atọ (2001-2003), mkpebi Gerard hụrụ ya ka ọ debanyere aha ya na ịgafe ule na ụlọ akwụkwọ mara mma nke Le Masia nke Barcelona.
Oge Gerard Deulofeu na Le Masia.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nrọ nwatakịrị ọ bụla sonyere na ụlọ akwụkwọ FC Barcelona nke Le Masia. Mgbe o sonyeere ya, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nye Gerard na-eto eto n'ihi na ọ ghaghị ịchụ ọtụtụ àjà. O nwere oge ụfọdụ ọ na-agha ịhapụ mmemme ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ihe ọ na-atụ anya ya n'ụlọ akwụkwọ. Ma na ntụgharị ihu, nwa okorobịa Gerard nwere obi ụtọ ime ihe ọ hụrụ n'anya n'ezie.
Gerard Deulofeu jiri oge kachasị aka na Le Masia. Ka ọ na-etolite, ọ hụrụ na ọ na-edozi onwe ya n'ime ndụ na agụmakwụkwọ ma na-eme ọganihu dị jụụ site na ọgbọ dị iche iche. Ọganihu dị otú ahụ mere ka ọ bụrụ onye nduzi na usoro ahụ.
Gerard Deulofeu Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
2011 bụ afọ na-eto eto bụ Gerard banye na Barcelona B. Ọ bụ ezie na ọ nọ n'òtù ahụ, o gosipụtara nkà na ikike dị ukwuu. E nwere oge ọ na-apụta dịka ndị egwuregwu kachasị mma n'òtù dị elu.
Ihe ịga nke ọma Gerard Deulofeu na Barcelona B.
Ịtụle ihe mgbaru ọsọ 27 na ụdị 67 hụrụ nwa okorobịa Gerard na-ebi ndụ dị ka atụmanya dị elu nke Nou Camp. Nke a na-adabara ya na-akwalite ka FC Barca mbụ otu.
Mgbe ya na ndị ọrụ Barca na-eto eto, nwa okorobịa Gerard chere na nrụgide a na-adịgide adịgide na-eme ka ọ dị mma karịa ndị na-egwu ya - David Villa na Pedro Rodriguez. N'ịbụ onye na-enweghị ike imeri nrụgide ahụ, ọ hụrụ ka ọ na-ebufe ya na Everton.
Gerard Deulofeu akụkọ nke na - Bilie na-ewu ewu Akụkọ:
A hụrụ Everton's Goodison Park dị ka ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ maka Deulofeu dị afọ iri na ụma. Ọ bụ ezie na ọ na-akọ ugbo na klọb ndị ọzọ (Sevilla, AC Milan) nke mere ka ọ nweta ahụmịhe ọrụ bọl. Mgbe Deulofeu chọpụtasịrị ụdị ya, ọ laghachiri na Premier League.
Deulofeu mesịrị chọpụta ihe ndò ọzọ na Watford nke dị ka n'oge ederede hụrụ mmekọrịta siri ike na onye isi mmụọ nke ọgbakọ Troy Deeney.
Gerard ga-echeta mgbe nile maka ọkachamara na-emeri ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Gerard Deulofeu, Mari Vilches Storyhụnanya Akụkọ:
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na omume ọma Gerard Deulofeu gụnyere iguzosi ike n'ihe, ịrụsi ọrụ ike na ịdị umeala n'obi agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vaịn hụrụ n'anya nye ụmụ nwanyị.
N'etiti ndị na-agba ọsọ na-aga nke ọma, e nwere enyi nwanyị mara mma, na onye mara mma nke Mari Vilches.
Gerard Deulofeu na Mari Vilches.
Na-ekpe ikpe site na anya ha, ị nwere ike iche na, Deulofeu kwesịrị ịka nká. N'ezie, a mụrụ Mari Vilches na 8th ụbọchị nke June 1992. Nke a na-egosi na ọ bụ afọ 2 karịa nwoke ya.
Mari nwere ezinụlọ Catalan dị ka Gerard. O nwekwara otu ezinụlọ dị otú ahụ. Dị ka nwoke ya, ọ na-asụ Catalan, Spanish na Bekee.
Ndị na-ahụ n'anya, Gerard na Mari bụ ndị nne na nna nye nwa ha nwanyị mara mma nke a na-amaghị aha ha n'oge ọ na-ede ihe.
Ezinụlọ Gerard Deulofeu.
Gerard Deulofeu Ndụ Nke Onwe:
Ịmata Personal Life nke Gerard Deulofeu ga-enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu.
Malite, ọ bụ onye na-adịghị ada mbà ruo mgbe ọ nwetara ihe ọ chọrọ ma ọ bụ chọta ebe ebe nkasi obi. Ọnụnọ nke Gerard Deulofeu na-egosipụta mmalite nke ihe siri ike na ọgba aghara. Site na mgbe ọ malitere ọrụ, Deulofeu egosiwo na ya nwere obi ike, kpebisie ike ma nwee obi ike banyere ikike ya. Gerard bụ onye na-ajụ iche banyere ọdịnihu. Dị ka Spaniard si kwuo;
“Ọdịnihu? Amaghị m. Achọrọ m ilekwasị anya kwa ụbọchị na egwuregwu ọ bụla ma kpọọ bọọlụ m kacha mma. Ọ bụrụ n’iche n’ọdịnihu n’ihe ịchọrọ ịnọ n’ime ọnwa atọ, ọnwa anọ, echere m na isi na-agba gị. Ya mere, [ụzọ kachasị mma] bụ ilekwasị anya taa wee gbalịsie ike. ”
N'ikpeazụ na ndụ ya, Gerard bụ nna na-ahụ n'anya nke na-ahụ na nwa ya nwanyị bụ akụ na ezi isi iyi udo ya.
Gerard Deulofeu Ndụ Ezinụlọ:
Gerard Deulofeu zụlitere n'obodo nta Catalan ma ọ bụghị obodo obodo ma ọ bụ obodo obodo Spanish. Eziokwu a na-egosiputa mmalite ịdị umeala n'obi ya na ezinụlọ. Ndị niile nọ n'ezinụlọ Deulofeu na-asụ asụsụ Catalan na Spanish.
Dị ka n'oge ederede, a maara ndị nne na nna Gerard Deulofeu ibi ndụ nke onwe na nke obi ụtọ. Deulofeu emeela mkpebi doro anya ka ọ ghara ịchọ ka ọha na eze mara mama ya na papa ya. Ozi banyere ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị ka bụ ihe nzuzo.
Taa, àjà ndị Deulofeus mere mere ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ si obodo nta dị na Riudarenes na ebe dị nso.
Dabere na Wikipedia, Riudarenes bụ obodo dị na mpaghara Girona, Spain. Obodo a na-ekpuchi mpaghara nke kilomita 47.6 na ọnụ ọgụgụ ndị bi na 2014 bụ 2,148. Imirikiti ndị bi na Riudarenes gụnyere ndị Deulofeu bụ ndị Kraịst site n'okpukpe.
Dị ka n'oge ederede, dabere na Transfers Market Report, Gerard Deulofeu nwere uru ahịa ugbu a nke £ 16.20m na ụgwọ £ 60,000 kwa izu na aha ya.
Bụ nde mmadụ adịghị agagharị na ndụ ọmarịcha ndụ maka Deulofeu. Mbido ya dị umeala n'obi akụziworo ya ịbụ maara ihe banyere ijikwa usoro ego football ya. Nke a pụtara na ị gaghị etinye aka dị ka onye nzuzu, ma ọ bụ na-agbanwe ndụ ya.
Gerard Deulofeu nwere ikike imeri ama ama mya na ụzọ ya ka ọ na-elekwasị anya n'egwuregwu ya.
Gerard Deulofeu Eziokwu Eziokwu:
Ịhụnanya maka nkịta ya:
Ikekwe ị hụla ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ na-egosi ịhụnanya n'ebe anụ ụlọ ha nọ. Gerard Deulofeu abụghị otu. Ọ bụ ezie na enwere okwu na-enweghị ntụkwasị obi fọdụrụ na egwuregwu nke oge a. Nke a anaghị elebara mmekọrịta anya
n'etiti Gerard Deulofou na nkịta ya nke na-aga n'aha ha Sherry na Lucas.
N'afọ ahụ, a mụrụ Gerard Deulofeu (1994).
(i) Nelson Mandela ghọrọ onye isi ojii mbụ nke South Africa mgbe ọchịchị ọcha nke narị afọ atọ gachara.
(ii) Ịntanetị nwetara ezigbo na 1994 mgbe e guzobere ma ma Yahoo ma Amazon. Ndị mmadụ nwere ike ikwurịta okwu na ndị na-amabeghị ọtụtụ puku kilomita site na ịzụta akwụkwọ abụghị otu ihe ọzọ. (iii) N'ikpeazụ, afọ 1994 hụrụ ka PlayStation na-ebido.
Gerard Deulofeu Biography Video Nchịkọta:
Nyochaa: Daalụ maka ị gụ akwụkwọ anyị Gerard Deulofeu Nwatakịrị. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.